Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot | Site na Linux
Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot hụrụ ìhè ụbọchị ole na ole gara aga. Dị ka anyị na-eme na ntọhapụ ọ bụla nke ọgba aghara a, lee ụfọdụ ihe ị kwesịrị ime mgbe na-eme a ndozi site na mbido.
4 4. Wụnye ngwaọrụ enyemaka iji hazie Ubuntu
5 5. Wụnye mkpakọ ngwa
6 6. Wụnye ndị ọzọ ngwugwu na nhazi njikwa
7 7. Chọta ngwa ndị ọzọ na Ubuntu Software Center
8 8. Gbanwee interface
9 9. Wụnye egosi na Quicklists
10 10. Wụnye Compiz Settings Manager & ụfọdụ mgbakwunye mgbakwunye
11 11. Nchịkọta ụwa
O yikarịrị ka mgbe ahapụchara Ubuntu 11.10, mmelite ọhụrụ nke nchịkọta dị iche iche na-abịa na onyoyo ISO nke ekesara site Canonical apụtala.
4. Wụnye ngwaọrụ enyemaka iji hazie Ubuntu
5. Wụnye mkpakọ ngwa
6. Wụnye ndị ọzọ ngwugwu na nhazi njikwa
7. Chọta ngwa ndị ọzọ na Ubuntu Software Center
chromium, ihe nchọgharị weebụ
8. Gbanwee interface
Na 2dị n'Otu XNUMXD - ihe ndabere ọzọ nke Qt na Unity
Unity 2D dị maka ndị ọrụ na-enweghị ngwaike dị ike ma ọ bụ ndị na-adabaghị na 3D ejiri Unity. Ọ dị ọkụ karịa ọdịiche ọdịnala mana ọ na-enyekwa otu ọrụ ahụ.
A na-eche na ọ dị njikere iji ma Ubuntu ga-anwa iji Unity 2D ma ọ bụrụ na kọmputa gị adịghị 3Ddị n'otu XNUMXD nkwado. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye ya aka n'ihi ihe ụfọdụ ...
Wụnye Unity 2D
9. Wụnye egosi na Quicklists
10. Wụnye Compiz Settings Manager & ụfọdụ mgbakwunye mgbakwunye
11. Nchịkọta ụwa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot
Mabganua, The Jackal dijo
Onyinye gị bụ ezigbo mkpuru, nke a bụ ihe m chọrọ ị ga-ekele gị nke ukwuu na ọfụma na ndụ.
Zaghachi Mabganua, The Jackal
Enwere m nsogbu na-enweghị isi na ụdị a, nke ahụ bụ na ozugbo m wụnye flash, mgbe m na-abanye na netwọk mmekọrịta TUENTI, kaadị netwọk ga-apụ n'anya, ya bụ, mgbaàmà ahụ efughị, mana akụrụngwa anaghị edebanye kaadị Wi-Fi ọ bụla. ma ọ bụ netwọk ethernet, na ọbụnadị imelite nwere ike belata ọdịda. Ihe ị ga-ekwu nke ahụ na-eme m naanị kemgbe 11.04, na ndị gara aga na nkesa ndị ọzọ dịka Kubutnu 11.10 anaghị eme m.
ndị mmadụ enwere m ụdịdị ubuntu a ma ọ gaghị ekwe ka m budata ihe ọ bụla ... enwere ike inyere m aka ???
na-akpali nnọọ mmasị, na-eleta ..
Nke bụ́ eziokwu bụ na agaghị m ama otú m ga-esi nyere gị aka. Onye ọ bụla nwere echiche ọ bụla? Dị ka m ghọtara, ọ dị ka ọ bụ nsogbu na kernel karịa distro.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, kernel nke Ubuntu ji mee ihe enweghịzi ọkwọ ụgbọ ala ahụ, nke na-adọta mmasị m.
Ka o sina dị, ọ na-esiri m ike ikwere na kernel anaghịzi akwado onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ ... agbanyeghị ... echiche?
Echere m na ọ nweghị onye ọkwọ ụgbọ ala, mgbe m tinyere lsmod | grep rt Enwere m ọtụtụ ọkwọ ụgbọala mana ọ nweghị rt2870sta, kama na ndị ọzọ ọ bụ 11.04 ma ọ bụ mint ọ pụtara. Agbalịrị m iji aka wụnye, mana m ka na-emekwu salad ma emeghị m ihe ọ bụla haha ​​.. daalụ maka azịza ya
Zaghachi Maxi Gonzalez
Ugbolu 89 dijo
Ezigbo, ị na-enye ezigbo onyinye ebe a ... ugbu a achọrọ m ịjụ ajụjụ. Ejirila m ubuntu 11.10 64 bit ubuntu, nke m kwalitere site na ubuntu 11.04. okwu a bụ ... na pc m anaghị agbanyụ !!! M hapụrụ na nbanye menu, ebe ị ga-etinye paswọọdụ. (ndo maka nsogbu m) Achọrọ m ịjụ ma ọ ga-ekwe omume ịrịọ ya ma ọ bụ na ọ dị onye nwere ike idozi ya. Cheers! Paul
Ka ịdekọọ vidiyo na kamera kamera gị, ana m akwado ka ị gbalịa Chiiz.
Ọ bụrụ na ị na-anwa idekọ vidiyo na Mmetụta ọmịiko ọ nwere ike ịbụ okwu Google (ọ bụrụ na ị na-achọ iji nkata Google). Have ga-ahazi ya n'ụzọ pụrụ iche iji mee ka ọ rụọ ọrụ ... Echere m na n'oge ụfọdụ m mere post na isiokwu ahụ. Chọọ “ọmịiko” na igwe nchọta ihe ntanetị. Cheers! Paul.
Nke a bụ ihe mere m ji kwuo blog a casi na-anọpụ iche. Nke a dị ka ntuziaka Windows.
Ihe kachasị mma bụ iwepu data iji wụnye site na ncha, ma gbalịa iji Open Xange ma ọ bụ Mageia mee ka ihe ndị ahụ ghara ime gị ọzọ
Wepu ihe niile ahụ site na ndị ọkwọ ụgbọala ma mee:
sudo apt-enweta -y wifi-radar
M ga-edozi dijo
Ndewo, abụrụ onye ọrụ Linux ọhụrụ, dịkwa ka ọtụtụ ndị mbido (site n'ihe m gụrụ), ahọpụtala m ịmalite njem Ubuntu m. Ewunyewo m 'Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot' n'ihi na ọ bụ ihe ọhụrụ n'ime distro a, ma enwere m obi ụtọ na ya. Achọpụtara m nkuzi gị ma nyeere m aka nke ukwuu iji tinye ihe ndị ọzọ na-anaghị abịa na ndabara, agbanyeghị, enweghị m ike ịwụnye 'Ubuntu Tweak' n'agbanyeghị na agbasoro m ntuziaka gị na leta ahụ. Ugbu a oge ọ bụla m melite m ga - enweta ihe ndị a:
W: Enweghị ike inweta http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu/dists/oneiric/main/source/Sources Achọghị 404
W: Enweghị ike inweta http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu/dists/oneiric/main/binary-i386/Packages Achọghị 404
Obi ga-adị m ụtọ ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgwa m otu m ga-esi gbanwee nke ahụ, ma ọ bụ ọzọ (ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume) otu esi esi wụnye ya na-enweghị njehie ahụ (ma ọ bụ ọ bụrụ na onye ọzọ nọ n'ime obodo nwere ike inyere m aka, m ga-enwe ekele maka ya ).
Ana m ekele gị n'ọdịnihu ma na-ezitere gị ekele m.
Achọpụtara m na Ubuntu Tweak adịghị ka ọ nwere ngwugwu maka Ubuntu 11.10 mana.
Onye ọzọ enwere ike ikwenye ya?
Ahapụrụ m njikọ ahụ na ibe gọọmentị nke ọrụ ahụ: https://launchpad.net/ubuntu-tweak
Ole na ole dijo
Che, onye ndu ahụ chere na onye ọrụ nwere ịntanetị. Mana na mbido sistemu sistemụ ị naghị ajụ onwe gị n'asụsụ ị chọrọ ya? Nke ahụ bụ na njikọ ịntanetị, mgbe ị na-ahọrọ asụsụ ọzọ na-abụghị Bekee, a na-ebudata ngwugwu asụsụ kwekọrọ na nhọrọ ahụ. Ma ọ bụ nke ahụ gbanwere na nsụgharị a? Ọ bụrụ na m nọrọ otu a, ahụghị m ihe ọ bụla pụtara n’amaokwu asụsụ ahụ. Ọ bụ ezie na ọ dị mma, ọ dị irè maka ndị na-etinyeghị nchịkọta ahụ na mbụ, n'agbanyeghị ihe ọ bụ.
Zaghachi ole na ole
Oe broder, echere m na ị mejọrọ onyinyo nke Gnome kpochapụwo, nke ị tinyere bụ mbipute 11.04, na 11.10 ọ dịghịzi ka nke ahụ, ogwe ndị ahụ ... dị iche, m na-ekwu naanị ka onye na-anwale ya emesia anaghị eju m anya saying nke a ezighi ezi ma ọ bụ na m mehiere….
Ekele si Nicaragua
Daalụ broder! Rịba ama.
Daalụ nke ukwuu, ị bụ nwa akwụkwọ nke isiokwu a ma mee ka echiche ndị dị na nke a doo anya. Gaa n'ihu ka Linux -ubuntu- rute onye ọ bụla n ’ụzọ dị mfe, pịrị ọnụ na N’efu.
Site na Colombia
Ana m asị gị nnọọ! Ọ dị mma na ọ baara gị uru.
Diaz-jorge 95 dijo
Enwetara m nke a:
Nke ahụ bụ n'ihi na n'otu oge dabara (ma ọ bụ site na ọnụ ma ọ bụ site na synaptic) kwụsịrị na mberede. O nwekwara ike ime mgbe ị mepee ụgbọ oloko synaptic ma ịchọrọ ịwụnye ihe site na njedebe ...
Ihe ngwọta bụ ihichapụ mkpọchi faịlụ
Cheers !! Paul.
Ok, aga m eme nke ahụ mgbe ahụ.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka itinye uche gị. Amaara m na ihe na-eme m bụ ihe dị ịtụnanya, n'ihi na ahụbeghị m ihe ọ bụla na ịntanetị yiri ya.
Ana m ekele gị ọzọ na ekele anyị niile.
Enwere m nsogbu, njikwa melite na-agwa m na emelitere usoro ahụ maka oge ikpeazụ 83 ụbọchị gara aga, ana m enye ya ego, ọ na-amalite mana mgbe ahụ ọ na-ezitere m akụkọ na-esote na ihuenyo ma ọ naghị ekwe ka m melite, ihe ana m eme:
"O nwere ike ibudata ozi nchekwa"
Ndewo, ezigbo ọkwa, m hụrụ blọọgụ n'anya, ana m agụ mgbe niile ebe m hụrụ na ọ na-atọ m ụtọ ma na-enye aka, ana m enweta ozi ịntanetị site na posts 🙂
Ugbu a enwere m ajụjụ ... M dị ọhụrụ na Linux ma mgbe m nwalere Ubuntu 11.04, m gbanwere Wi-Fi ọkwọ ụgbọala (USB) nke bụ rt2800usb n'ihi na ọ dị nwayọ nwayọ, m wee gbanwee ya na rt2870sta dị ka ndị a:
wee gaa blacklist rt2800usb.
Nsogbu bụ na na ụdị ọhụrụ nke Ubuntu nke rt2870sta enweghị ike ịchọta ya na ọ gaghị ekwe m omume ịwụnye mmelite na ọkwọ ụgbọ ala na ihe niile sitere na ịntanetị. Ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka, m ga-enwe ekele maka ya. Ugbu a, m na Linux Mint 11 na rt2870 na-arụrụ m ọrụ.
Enwere m olileanya na enyemaka gị Daalụ!
tụkwasịrị obi na m nwere otu nsogbu ahụ, emelitere site na 11.04 ma enwere m obi ụtọ, ka oge na-aga site na njehie malitere ịpụta, m na-enyocha obere ma ọtụtụ ndị kwadoro ka ị wụnye site na ncha, na-eme nkwado ndabere nke ihe gị doro anya
Echeghị m na ọ ga-abụ nnukwu enyemaka, mana ee, m gbara ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, obere nkọwa m na-alụ ọgụ funyụrụ ma nhọrọ ndị ọzọ apụta.
ekele si Mexico
Zaghachi Sheko QuinteRock
Daalụ bụ nkuzi zuru oke maka Ubuntu 11.10, enwere m ekele maka ya .. !!!
O kwere omume wedata Ubuntu
Mana ọ dị mgbagwoju anya na nsonaazụ ya enweghị ike ịkọwa.
Ndụmọdụ m: gbalịa ọzọ iji wụnye Ubuntu kachasị ọhụrụ (site na ncha, ya bụ, ịhazi usoro ahụ). Ọ bụrụ na njehie ahụ na-aga n'ihu, gbalịa ịwụnye Ubuntu ochie.
Ọ bụ azịza ga-ewe obere oge na nke kachasị mfe.
N’agbanyeghị nke ahụ, nsogbu gị na-adọta uche m. Anụtụbeghị m ụdị ihe a. Ma hey ... enwere mgbe mbụ ...
Anụtụbeghị m ụdị ihe ahụ.
Ì ji n'aka na ọ bụ mgbe ahụ n'oge ahụ?
Ọ bụghị onye ọzọ kpatara nsogbu ahụ?
Enwere m nsogbu dịka m ga-achọ imeghe faịlụ na ndọtị .xfig ozugbo nautilus. Ọ pụtaghị na ndabara na ọ ga-emepe na mmemme "Xfig" ma ọ bụrụ na m nye ya "mepee" na ngwa ahụ apụtaghị (arụnyere ya). Kedu ihe ị kwadoro?
Zaghachi brenda solis
M na-eji XFCE ugbu a na mgbe m na-aga Mepee na ... na mgbakwunye na ndepụta nke mmemme, ọ na-ahapụ m ka m tinye iwu omenala (ya bụ, chọta usoro mmemme ọzọ nke na-apụtaghị na ndepụta ahụ).
Na mkpokọta, mmemme ndị ahụ dị na / usr / bin.
Ndewo, a bụ m Eduardo, si Spain.
Otu izu gara aga m wụnyere 11.10 ma kemgbe ahụ ọ nyere m nsogbu nke mere ka m nwee obi ilu.
N’oge ọ bụla, n’elekere 17:XNUMX nke ụtụtụ, m na-apụ n’onwe m.
Achọwo m ebe niile mana ahụbeghị m ihe ngwọta.
Nwere ike inyere m aka na nsogbu a?
A kpọgidere ya na 17.
Ebe ọ bụ na emelitere m na 11.10 nke ahụ na-eme m.
Enwebeghị m ike ịchọta onye ọ bụla na ịntanetị iji nyere m aka na nsogbu ahụ ma ana m enwe obere olileanya.
Lee anya, ezigbo echiche nwere ike ịbụ lee ihe mmemme ndị bidoro na mbido.
Ọ bụ mgbe niile 17 gara aga, n'agbanyeghị oge? Hụ ma ọ bụrụ na ị nwere ọrụ ọ bụla ịhazi na crontab (enwere isiokwu banyere nke a na blọọgụ). Mmakọ! Paul.
Ọ dị afọ 17, n'agbanyeghị oge ị gbanyụrụ ya ma ọ bụ gbanye ya.
M, si na amaghị m, achọpụtala na ọ ga-abụ oge ọ ga-emelite na 11.10.
Elere m anya edemede gị na mgbochi ma amaghị m ihe m ga - eme iji hụ ma m nwere ọrụ ọ bụla emebere, ebe ọ bụ na ahụrụ m naanị iji ederede iji mezie isiokwu dị ka mmelite.
Nwere ike ịgwa m ihe m ga - eme iji hụ ọrụ ndị ahụ ahaziri?
Daalụ maka nlebara gị anya.
Ọ bụrụ na m na-echeta n'ụzọ ziri ezi, na
Okwesiri ideputa ihe edere edere (ma oburu na odi).
Achọpụtara m na ọ dị ịtụnanya na ọ nwere njikọta na oge mmelite Ubuntu. Anụtụbeghị m ma ọ bụ gụọ nsogbu yiri nke ahụ (na ụdị Ubuntu ọ bụla).
Ikpeazụ, e nwere mgbe echichi si ọkọ.
Na crontab -l m ga - enweta: «enweghị crontab maka Eduardo»
Yabụ kedu ihe ị kwadoro ka m mee? Nkwụnye ahụ sitere na ncha ọ pụtara na m na-ahazi ma wụnye ọzọ ma ọ bụ enwere m ike wedata na nke gara aga?
Ndewo, a bụ m onye ọhụrụ na Ubuntu 11.10 ma blọọgụ a bụ mmalite dị mma maka m. Naanị nsogbu m nwere bụ na kaadị vidiyo anaghị amata m. Enwere m NVIDIA GT 240 ma achọgharịrị m ebe niile maka azịza ya na ahụghị m ihe ọ bụla. Nsogbu bụ na oge ọ bụla ihuenyo ahụ na-agba oji wee laghachi n’ebe ya mgbe sekọnd ole na ole gasịrị na nke a na-eme ka ọ bụrụ ihe iwe na-arụ ọrụ na kọmputa. Ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka ọ ga-adị mma. M na-arịọ gị ka ị bụrụ nkọwa zuru oke na nkọwa n'ihi na dịka m kwuru na m dị ọhụrụ na Linux.
PS: Ebudatara m ndị ọkwọ ụgbọala dị na weebụsaịtị NVIDIA mana enweghị m ike ịwụnye ya n'ihi na ọ na-ekwu na m ga-abanye dị ka mgbọrọgwụ mana ọbụlagodi na m mere, ọ na-enye m njehie.
You nwara ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala nwe ụzọ "ọdịnala"? Lee ihe onyonyo a ka ịmata ka esi eme ya: http://www.youtube.com/watch?v=E3GLBYMz7No
O di n’asusu bekee mana aghotara ya nke oma ...
Ee emeela m nke ahụ mana m ka nwere otu nsogbu ahụ. Mgbe m gara na Sistemụ Ozi / eserese, na Onye njikwa m ga-enweta Amaghị Ama.
You nweta ihu ojii mgbe ị wụnye ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ ozugbo ị wụnye Ubuntu, na-eji ndị ọkwọ ụgbọala eme ihe na ndabara?
Ee, anaghị m etinye ihe ọ bụla. Echere m na ọ bụ naanị ha bụ ndị. M budata ndị sitere na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Nvidia mana enweghị m ike ịgba ya n'ihi na ọ na-agwa m na ọ na-agba ọsọ sava X yana na m ga-emechi ya mana enweghị m ike. Agbalịrị m ịkwụsị $ sudo /etc/init.d/gdm mana ọ gaghị ekwe m.
MMA. Ihuenyo ojii nwere ike ịbụ n'ihi enweghị nkwekọrịta n'etiti ịdị n'otu (GNOME Shell nke na-abịa na Ubuntu) na onye na-anya vidiyo gị. Otú ọ dị, e nwere ihe ngwọta: Unitydị n'Otu 2d, nke na-adịghị eji ihe mejupụtara nke Unity 3d mana maka onye ọrụ njedebe ọ na-agwụ na-akpata nsụgharị ọrụ yiri nke ahụ.
Usoro iji soro:
1) Wụnye ngwugwu ịdị n'otu-2d
2) Malitegharịa ekwentị ma ọ bụ pụọ na mgbe ihuenyo ịbanye aha njirimara na paswọọdụ gị na-egosi, na ala ị ga-enwe ike ịhọrọ gburugburu ebe ịchọrọ iji. Ahọrọ m nhọrọ Unity 2d. Site ugbu a gaa n'ihu, oge ọ bụla ị banyere, nke ahụ ga-abụ nhọrọ a họọrọ. 🙂
Ka anyị mara ma ọ bụrụ na enwere ike idozi nsogbu ahụ. 🙂
M wụnye Ubuntu 11.10 site na ncha ụbọchị ole na ole gara aga na afọ ojuju zuru oke. N'oge ahụ, enwere m ikike draịva abụọ dị na mpụga, otu n'ime ha nwere nkebi atọ. Sistemụ Ubuntu matara ntọala ndị a n'ụzọ zuru oke, edoziri m ha ka ha nwee ike iji "NTFS Configuration Tool" dee ihe niile dị mma.
Couplebọchị ole na ole gara aga, m kwụsịrị diski ike mpụta site na ngalaba atọ ahụ ma jikọọ ọzọ nwere ikike ka ukwuu nke a ghọtara na-enweghị atụ.
Ma ugbua mgbe m bidoro ma ọ bụ bidogharịa kọmpụta ahụ ozi na-egosi, ugbua na mmalite Ubuntu na-ekwu na ọ ga-elele iguzosi ike n'ezi ihe nke diski ahụ wee pịa "S" ka ọ ghara ileghara nlele ahụ anya, emesịa m mee ya ugboro atọ na-egosi m aha nke draịva ndị dị na mpụga disk na-ejikọtaghị ejikọ!
Draịvụ ndị a na-ekwu maka ya apụtaghị na "Ngwá Ọrụ Nhazi NTFS", yabụ echere m na ọ bụ nsonaazụ nke faịlụ nhazi ụfọdụ emelitebeghị.
Kedu faịlụ ọ nwere ike ịbụ na kedu ka m ga-esi dezie ya ma ọ bụ mee sistemụ melite ya?
Ma ọ bụghị ya, ibe a abaara m uru nke ukwuu ma achọpụta m na saịtị ahụ n'onwe ya dị mma. Ekele m na ekele
Zaghachi El Urogayo
Ọnụ ụzọ12 dijo
Nzọụkwụ kọwara nke ọma na n'ụzọ dị mfe, dabara adaba maka ndị mbido.
Zaghachi na ọnụ ụzọ12
O di nwute na Ubuntu abiaghi iji ihe osise obula gha hazie Compiz.
tupu weta interface, na nhọrọ 3 "ọ dịghị" "isi" "zuru ezu" (ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ) n'ime ọdịdị. ihe ihere
Kedu otu m ga esi edozi okwu a, ugbua ka m dị ka ọnwa atọ, enweghị m ike imelite Ubuntu
Zaghachi Sergio Rodriguez
Isiokwu ndị a nwere ike inyere gị aka n'ọrụ a dị ebube: http://usemoslinux.blogspot.com/2010/08/como-instalar-paquetes-sin-tener-una.html http://usemoslinux.blogspot.com/2010/05/como-instalar-tus-aplicaciones.html http://usemoslinux.blogspot.com/2010/06/como-mantener-actualizadas-varias.html http://usemoslinux.blogspot.com/2010/10/como-restaurar-las-configuraciones-y.html
I nwekwara ike inwe mmasị na: http://usemoslinux.blogspot.com/2010/06/multipuesto-como-hacer-que-varias.html
daalụ ihe merenụ bụ ịnabata ihe ọ dịkwa na tab ma nye tinye agbanyeghị ọ bara uru ibi ubuntu na windo
Fє∂єяι ¢ σ Cℓєяι ¢ ι dijo
Ndewo, amalitere m na Ubuntu 11.10 (abụ m onye Windows) eziokwu bụ na m na-enwe mmasị na ya, enwere m mmasị ịwụnye ndị ngosi dịka (ihu igwe, ihe mmetụta ngwaike, ssh, monitors system, dropbox, virtualbox, wdg). Ebudatara m ya mana ịchọrọ ịme ya Amaghị m etu esi eme ya, ị nwere ike inyere m aka ma ọ bụ kọwaa otu esi eme ya? Daalụ nke ukwuu (Ctrl + D na ibe a; =)
Zaghachi Fє∂єяι ¢ σ Cℓєяι ¢ ι
Nnọọ! Lee, m na-etinye Xubuntu na netwọkụ igwe arụ ọrụ ndị katụrụla akwụkwọ n’ụlọ akwụkwọ ma enweghị m ike ịchọta ụzọ m ga-esi budata ngwungwu zuru oke iji nweta na pendrive ma wụnye igwe na-egbochi ubuntu site na igwe, faịlụ ahụ kpọọ ụdị nkeonwe dị ka mp3 na flash. Isi okwu a bụ na enwere m ike iji ya nweta ya mana ọ na-ebu ngwa ngwa ma ọ bụrụ na m gaa n'otu igwe ma si ebe ahụ gafere ha ndị ọzọ. M ga-enwe ekele maka enyemaka gị. Agbanyela m ụgbụ ahụ na enweghị m ike ịhụ etu m ga-esi mee ya. Daalụ!
PS: blog bara ezigbo uru ...
Zaghachi ka martinkbrl
O doro anya, ị nwere ike ịhọrọ ibudata ngwungwu asụsụ ozugbo site na nhazi. Ọ bụrụ na ịnweghị ịntanetị na oge ahụ, ịnwere ike ibudata ha ma emechaa. O nwekwara ike ime, dị ka ọ dị m, na ịchọrọ ịwụnye asụsụ abụọ (Bekee na Spanish).
Christian Bustos dijo
Ndewo Pablo, ọ dị mma, blọọgụ ahụ ejeela m ozi ọtụtụ! Adị m ọhụrụ na Linux n’ụzọ.
Achọrọ m ịhụ ma ị nwere ike inyere m aka, kamera ahụ anaghị amata ọmịiko n'eziokwu m amaghị ọbụna ma ọ bụrụ na Ubuntu 11.10 ghotara ya, ọ na-enye iwu lsusb ma ọ na-enye m nke a na kamera ahụ (Bus 001 Ngwaọrụ 002: NJ 0c45: 62c0 Microdia Sonix USB 2.0 Igwefoto) M goglie ya na ebe ahụ achọtara m ihe na Bekee, ha kpọkwara mmemme abụọ «cheese» na «guvcview» m arụnyere nke abụọ na mmemme ahụ wee chọpụta kamera wee hazie ya, mana ọ naghị ekwe ka m dekọọ vidiyo, na-ese foto ma ka ọmịiko anaghị amata ya, m ga-anwale mmemme ọzọ iji hụ ma ọ na-arụ ọrụ 100% n'ụzọ ahụ, aga m agwa gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ngwọta ọ bụla ọzọ ma ọ bụ ihe ga-etinye ndị ọkwọ ụgbọala maka cam ahụ.
Tupu anyị emeela nke ukwuu…
Zaghachi Cristian Bustos
Enyi m nwere ubuntu 11.10 ma enweghi m ike iwunye faịlụ .bin, i nwere ike inyere m aka?
Ikwesiri 25 dijo
ma ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka baina nwere mbipute 11.04
Zaghachi ka eddy_tk25
Anyị bụ ndị pụrụ iche